လေနှင့်ဒီရေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသော SKWTD တာဘိုင်ဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်ယူမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » လေနှင့်ဒီရေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသော SKWTD တာဘိုင်ဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်ယူမည်
လေနှင့်ဒီရေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသော SKWTD တာဘိုင်ဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်ယူမည်
Posted by Mr WorldWide on May 29, 2013 in Computers & Technology, Science & Religion, Sciences & Resources |3comments
လေဖြင့်စွမ်းအင်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပင်လယ်ရေအောက်ရှိရေစီးကြောင်းများကိုအသုံးပြု၍ စွမ်းအင်ထုတ်ယူ ခြင်းများကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်ယူမှုစနစ်များသည် ယခင်ကတည်းကပင် ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ MODEC ကုမ္ပဏီ (Mitsui Ocean Development & Engineering Co) မှ ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာများ သည် မကြာမီကာလတွင် အထက်ပါနည်းလမ်းနှစ်မျိုးအားပေါင်းစပ်၍ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ SKWTD (Savonius Keel and Wing Turbine Darrieus) ဆိုသည်မှာ Savonius တာဘိုင်အမျိုး အစားနှင့် ီမေမငနကျ တာဘိုင်အမျိုးအစားနှစ်ခုအား ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရေပေါ်ပေါ်နေ သော အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေစီးကြောင်းအောက်ဘက်တွင် Savonius ဒီရေတာဘိုင်နှင့် လေထဲတွင် Darrieus အမျိုးအစား ဒေါင်လိုက်လေရဟတ်တာဘိုင်တို့အား ပေါင်းစပ်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တာဘိုင်နှစ်ခုကို အလယ်ဗဟိုတွင် ဂီယာအုံ၊ သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးထားပြီး ၎င်းဂျင်နရေတာသည် ရေစီးကြောင်း၊ သို့မဟုတ် လေမှဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးစလုံးမှဖြစ်စေ ရရှိသောစွမ်းအင်ကိုလျပ်စစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ထို့ပြင် ဒီရေတာဘိုင် ၏ လည်ပတ်မှုသည် လေရဟတ်တာဘိုင် ၏ လည်ပတ်မှုအား အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
Darrieus တာဘိုင်၏ပုံစံမှာ မည်သည့်အရပ်မျက်နှာမှလေတိုက်ခတ်သည်ဖြစ်စေ လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ဒီရေတာဘိုင်မှာမူ ဦးတည်ရာတစ်ဖက်တည်းလည်ပတ်ပြီး ရေစီးကြောင်းလားရာဘက်သို့ အလိုက်သင့်နေရာချရန် လိုအပ်ပေသည်။ ဤတာဘိုင်သည် ရေစီးကြောင်းအားပျော့သွားလျင်ပင် ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး တာဘိုင်ဒလက် များကို ဆလင်ဒါပုံစံပြုလုပ်ထားသဖြင့် ရေသတ္တဝါများကြောင့်ဖြစ်ပွားသော ထိခိုက်မှုများမရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် တာဘိုင်ဒလက်များလည်ပတ်မှုသည် ရေစီးနှုန်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ရေနေသတ္တဝါများအတွက် ဘေးကင်းမှုဖြစ်စေပြီး ဂေဟဗေဒစနစ်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
လေရဟတ်အား ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၄ရ မီတာ (၁၅၄ ပေ )တွင် တပ်ဆင်သင့်ပြီး ဒီရေ တာဘိုင်၏အချင်းမှာလည်း ၁၅ မီတာ (၄၉ ပေ)ရှိရပါမည်။ ၎င်းတာဘိုင်နှစ်ခုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါကအိမ်ပေါင်း ၃၀ဝ ခန့်အား လုံလောက်စွာစွမ်းအင်ပေးနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Source: MODEC via CBS News
လျှပ်စစ် လိုအပ်ချက် မြင့်လာတာနဲ့အမျှ
လွယ်လွယ်ကူကူ အဆင်ပြေပြေ ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းတွေ ရှာလာရတယ်
ဒီလို နည်းလမ်းတွေ ပေါ်လာတာကို ကြိုဆိုတယ်။
အဲ့သည့်ဘက်တွေကနေ ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါဇီ လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပါရဲ့ဗျို့..
Since the beginning of the 21st centuryanumber of the largest Japanese electronics companies have struggled financially and lost market share, particulary to South Korean and Taiwanese companies. Japanese companies have lost their dominant position in categories including portable media players, TVs, computers and semiconductors. Hit hard by the economic crisis of 2008 Sony, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, Sharp, NEC and Toshiba reported losses amounting to $17 billion. By 2009, Samsung Electronics operating profit was more than two times larger than the combined operating profit of nine of Japan’s largest consumer electronic companies. The relative decline has been ascribed to factors including high costs, the value of the yen and too many Japanese companies producing the same class of products, causingaduplication in research and development efforts and reducing economies of scale and pricing power.
Japan’s education system has also been highlighted asapossible contributing factor.
လတ်တလော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာလေး ပြောခွင့်ပြုပါ။
စက်မှုဇုန်တွေကို ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခုရက်ပိုင်းမှာ စက်မှုဇုန်မှာရှိကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေထဲကမှ အချို့သော လုပ်ငန်းများကိုတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမယ်လို့ ဖွဘုတ်တွေမှာ တွေ့လိုက်ရတော့….
စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက် စက်မှုဇုန်တွေမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို သာတူညီမျှဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အပြည့်အဝပေးနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ လုံးဝမပေးနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်ပေးနိုင်သည်ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းတိုင်းကို မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်။
နောင်တစ်ခေတ်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မယ့် နည်းပညာအသစ်အဆန်းများကိုလည်း မျှော်လင့်တောင့်တမိပါတယ်။